hataru/हटारु: माओवादी समितिमा नातागोताको जालो
माओवादी समितिमा नातागोताको जालो
नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २४ साउन
केन्द्रीय समिति भंग गरेर माओवादीले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिमा नातेदारहरूको जालो छ । दश जोडी त श्रीमान्-श्रीमती नै छन् । अन्य नातेदारहरूको संख्या पनि धेरै नै छ ।
यसअघिको माओवादी केन्द्रीय समितिमा पनि केही जोडी दम्पती सदस्य थिए । उनीहरू स्वतः महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य भएका छन् ।
माओवादीको २ देखि ६ साउनसम्म काठमाडौंमा चलेको सातौँ विस्तारित बैठकले एक सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय समिति भंग गर्दै त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक समितिका रूपमा विस्तार गरेको थियो । पछि आयोजक समितिको बैठकले दुई सय ५१ जनाको समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । २० जना पछि थप्ने गरी हाल भने दुई सय ३१ सदस्यीय समिति छ ।
आयोजक समितिमा सबैभन्दा धेरै सदस्य रुकुमबाट १५ जना छन् । दोस्रो स्थानमा चितवनबाट १४ जना सदस्य भएका छन् । यसबाहेक तेस्रो स्थानमा रोल्पाबाट १० र चौथो स्थानमा गोरखाबाट नौजना आयोजक समितिमा परेका छन् । पाँचौँ स्थानमा अर्घाखाँची र काठमाडौंबाट आठ-आठजना समिति सदस्य छन् ।
म्ााओवादीले पछिल्लोपटक आयोजक समिति सदस्य थपमा वरिष्ठता, निरन्तरताका साथै महिला, दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायबाट समेत सदस्य थप गरेको थियो । माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले कसैको नातेदारबाट नभई पार्टीमा पुर्‍याएको योगदान र पार्टीनीतिअनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य मनोनयन भएको बताए ।
दश जोडी समितिमा
दुई सय ३१ सदस्यीय माओवादी महाधिवेशन आयोजक समितिमा दश जोडी दम्पती छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तका श्रीमान्-श्रीमती समितिमा सदस्य छन् । लीलामणि पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल, विश्वनाथ साह, वाइसिएल संयोजक गणेशमान पुन, शक्ति बस्नेतका दम्पती नै आयोजक समितिमा छन् ।
यसबाहेक शक्ति बस्नेत र उनकी पत्नी सत्या पहाडी, तेजबहादुर वली र उनकी पत्नी जुनकुमारी रोका, विश्वनाथ शाह र उनकी पत्नी सीता पोखरेल, देवेन्द्र पराजुली र उनकी पत्नी कल्पना धमला, डिआर पौडेल र उनकी पत्नी गंगा बेल्वासे महाधिवेशन आयोजक समितिमा छन् । यसअघि नेकपा-माओवादी गठनपूर्व माओवादीमा धेरै दम्पती केन्द्रीय समितिमा थिए ।
महाधिवेशन आयोजक समितिमा दश जोडी मात्र होइन, दुई जोडी पूर्वपति-पत्नी पनि छन् । विश्वभक्त दुलाल र अन्जना विसंखे तथा टेकेन्द्र भट्ट र रेणु चन्द पूर्वपति-पत्नी हुन् । दुलाल र विसंखे विस्तारपूर्व नै माओवादी केन्द्रीय सदस्य थिए । भट्ट र चन्द दुवै अहिले महाधिवेशन आयोजक समितिमा चयन भएका हुन् । भट्ट र चन्द दुवै पूर्वसभासद् पनि हुन् ।
नातेदारमा भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सम्धी टिबी पाठकदेखि पोष्टबहादुर बोगटीका ज्वाइँ निर्मल आचार्यसम्म आयोजक समिति सदस्यमा परेका छन् । यसबाहेक अग्नि सापकोटाका भाइ कृष्णप्रसाद सापकोटा, हितबहादुर तामाङ र उनका सम्धी धामा लामा, हरिबोल गजुरेलका सम्धी झक्कुप्रसाद सुवेदी, राजकुमार शर्माका भाइ वसन्त शर्मा, रामकुमारकै बहिनी नारायणी शर्मा, जनार्दन शर्माका ज्वाइँ ओम शर्मा र गंगा कार्कीकी साली देवी खड्का पनि आयोजक समितिमा छन् ।
आठ जिल्लाबाट एकजना पनि परेनन्
विस्तार गरेर दुई सय ३१ सदस्यीय बनाइएको महाधिवेशन आयोजक समितिमा आठ जिल्लाको प्रतिनिधित्व नै हुन सकेन । तेह्रथुम, रसुवा मकवानपुर, मुस्ताङ, मुगु, डोटी, बाजुरा र दार्चुलाबाट समितिमा सदस्य परेका छैनन् । दैलेखबाट एकजना मात्र सदस्य छन् । २० सदस्य पछि थप्ने गरी खाली राखिएकाले थप सदस्य ती जिल्लाबाट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
१६ जिल्लाबाट पाँच र त्योभन्दा बढी, १७ जिल्लाबाट एक-एकजना
माओवादी महाधिवेशन आयोजक समितिमा १६ जिल्लाबाट पाँच वा त्योभन्दा बढी सदस्य परेका छन् । त्यसैगरी १७ जिल्लाबाट एक-एकजना प्रतिनिधि समेटिएका छन् ।
रुकुमबाट १५, चितवनबाट १४, रोल्पाबाट १०, सिन्धुलीबाट नौ, अर्घाखाँची र काठमाडौंबाट आठ-आठ, सिरहा र बाग्लुङबाट सात-सात, दाङ, धादिङ र महोत्तरीबाट ६-६ जना, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, झापा र दोलखाबाट पाँच-पाँचजना आयोजक समितिमा परेका छन् । एक-एकजना सदस्य आउने जिल्लामा भक्तपुर, पाल्पा, स्याङ्जा, धनकुटा, इलाम, सुनसरी, पाँचथर, संखुवासभा, सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, पर्सा, जुम्ला, हुम्ला, बैतडी, कैलाली र मनाङ छन् ।
Posted by Nabin Bibhas at 4:46 AM
Female Former Combatants Struggle to Readjust to C...
लडाकु भर्ना २१ भदौबाट
ठेकेदारसँग पैसा लिएको माओवादीद्धारा स्वीकार
दिल्लीबाट फर्केकाहरूका नाममा
नवसंशोधनवादसाग सम्बन्धविच्छेद गर्न ढिला गरेछौ
ज्ञानेन्द्रले झन्डै गोली ठोकेर मारे
दोरम्बाः नेपाली सेनाको कालो दाग
यस्तो फाराम भर्दै छन् माओवादी नेता
बिग्रे माओवादीका घरबार
CPN-Maoist general convention from Jan 9-13
We are original Maoist: CPN-Maoist
Maoist probe panel gets most complaints against Da...
एफडिएको कार्यनीति तयार
Kinship, not capability, counts in UCPN (Maoist)
माओवादीले युद्धकै वेला भारतलाई लेखेको पत्र
Maoist army integration process remains stalled, r...
Growing President-PM rift exasperating political c...
१४ माघमा माओवादी महाधिवेशन
UCPN (Maoist) general convention from Jan 27
Five-point deal is no longer relevant: PM
YCL leaders warns of quitting party
Maoists settle for 251-strong organizing body
माओवादीमा दुई सय ५१ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति
Dahal proposes 68 new members
Can Dahal give his party's committee full shape?